संसदमा नवीनाकाे इन्ट्री, भन्छिन्ः दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अावाज उठाउँछु - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > अन्तरवार्ता > Current Article
फागुन २५, सृजना घिमिरे, at 11:08 AM
By खबर मञ्च / March 9, 2018 / Comments Off on संसदमा नवीनाकाे इन्ट्री, भन्छिन्ः दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अावाज उठाउँछु
विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष नवीना लामा पहिलोपटक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएकी भाग्यमानी महिला नेतृ हुन् ।
उनको जीवनमा यो छोटो समयमा भएको ठुलो राजनैतिक छलाङ हो । नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद बनेकी लामालाई हामीले अब संसदमा तपाईको सहभागिता, खबरदारी र पहरेदारी कस्तो रहन्छ ? भनी सोधेका छौं ।
प्रस्तुत छ, उनै लामासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संघीय संसदमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहने छ ?
जनताको म्यानडेट अनुसार मेरो उपस्थिति एक दमै सशक्त रहन्छ । जुन नीति बनाइने छ बन्ने छ वा बनेका छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस् या जनताले अनूभूति गर्ने गराउने कुरामा म आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु ।
अव यो सरकार स्थिर सरकार भएकाले देशको समृद्धि जनताको अभिभारा पुरा गर्न केन्द्रित हुने हुँदा त्यसको कार्यान्वयन र निरन्तरताका लागि उत्प्रेरक भएर लाग्ने हुन्छ ।
स्थिर सरकारले विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने या राजनीतिक व्यवस्थापनमा समय खर्चिने भन्ने विषयले पनि बेला बेलामा स्थान पाउँछ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरुको उपस्थिति हुनु र नहुनुमा फरक के भिन्नता रहला भन्ने प्रश्न उठ्छ नि ?
राजनितिक आन्दोलन अव सकिइ सकेको छ , हो छिटफुट रुपमा केही कुराको व्यवस्थापन गर्न बाँकी होला , त्यसको नियमन पनि यही सरकारले उचित ढंगबाट गर्नु पर्छ ।
अव राजनीतिक स्थायित्वको जगमा टेकेर काम गरेर देखाउनु छ । मलाई लाग्छ, संघीय व्यवस्थामा पहिलो पटक बनेको स्थायी सरकारलाई यति सुन्दर अवसर मिलेको यसको अधिकतम उपयोग जनताको हितमा, देशको हितमा बनाउन हामी हरदम लागि रहने छौँ ।
राजनीतिक आन्दोलन पुरा भएको यो अवस्थामा, अझ हामीलाई सजिलो के भने जनताको म्यान्डेट पुरा गर्ने प्रत्याभूति त संविधानले नै दिएको छ , त्यसैले हामीलाई त काम गरेर देखाउनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।
किन कि हामीले गर्ने काम त भव सागर नै छ नी । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत यावत कुरा गरेर देखाउनु छ त्यसैले मलाई लाग्छ जनता सुखी भएको हेर्ने हाम्रो कल्पना पुरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने छौ ।
वर्तमान सरकार स्थिर हुने भएकाले त्यसले गर्ने काम पनि दुर गामी खालको हुने हुँदा हाम्रो समर्थन र पहलकदमी सदा रहन्छ । यति पनि हुन सकेन भने हामी यो सम्मानीत संसदमा आउनुको तुक पनि रहदैन अनि हिजो र आजमा फरक पनि रहदैन ।
तपाई विद्यार्थी आन्दोलनलाई पनि महसुस गर्नु भएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, यसका चुनौती समस्या जे भनौ बुझ्नु भएको छ, समग्र विद्यार्थी वर्गले तपाईबाट अबको दिनमा के आशा गर्ने ?
हेर्नुस हिजोका दिनमा मात्रै होइन , सडकमा उभिएर जसरी मैले सशक्त रुपमा आवाज उठाए त्यो मेरो लागि उर्जा हो । समस्या यावत छन् तर समाधान पनि हामी बाटै हुनु पर्छ ।
अव त झन म नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको छु त्यसले गर्दा मलाई हिजो मैले देखेका समस्याहरु, चुनौतिहरुको समाधान , व्यवस्गापन कसरी गर्ने भनेर सरकार तहसम पुर्याउन सहज हुनेछ ।
केन्द्र सरकारले आफू मातहतका अरु सरकारको निगरानी र समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने हुँदा केन्द्र देखि गाउँ तहसम्म भए गरेका समस्या या कामलाई प्रभाकारी रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन मद्दत गर्ने छ ।
निर्वाचन भएको करीव ३ महिना पछि मात्रै सपथ ग्रहण भएको छ, यति ढिलासुस्ती अझै पनि किन भइ रहेको होला ?
हो , यो समस्या राष्टीय रुपमा अझै पनि छ , जो विगतमा पनि देखिँदै आएको थियो । तर यसो भई रहनु रहनु हुँदैन । सम्मानीत संसदको गरिमालाई उँचो बनाई राख्न यस खालमा ढिलासुस्तीको अन्त्य हुनु पर्छ । दलगत स्वार्थभन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय हितको निम्ति जनताको पक्षमा लाग्नु पर्छ भन्ने सवैले बुझ्न जरुरी छ ।
Published:2years ago on March 9, 2018
Last Modified: March 10, 2018 @ 7:53 pm
Filed Under: अन्तरवार्ता, राजनीति, सम-सामयिक
संसदमा चुनावै चुनाव
पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बियाेः समय सीमाभित्र काम नसकेपछि कार्यदलको म्याद थप
अमेरिकाले भन्यो- एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता हुँदैन
विश्व कीर्तिमानी ५७ सेन्टिमिटरका मगरको निधन
आस्था राउत प्रकरणः विमानस्थलदेखि फेसबुक लाइभ हुँदै प्रहरी जवानको उजुरीसम्म
मेची अञ्चल अस्पतालमा ल्याप्रोस्कोपिक शल्यक्रिया सेवा सुरु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार गर्ने चारजना पक्राउ
सिरहाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित आठ जना पक्राउ
सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिन ओली तयार, यसरी अघि बढ्यो घटनाक्रम
काठमाडौं । सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि …
काठमाडौं । सन् २००३ मा चीनलगायत ३० देशमा महामारीको रुप …
काठमाडौं । मलेसियाको पञ्जा (ग्लोभ) उत्पादन कम्पनी डब्लूआरपी एसिया प्यासेफिक …
टुटल, पठाओका यात्रु दैनिक ४५ हजार, आम्दानी दिनमै तीन हजार
काठमाडौं । पछिल्लो समय मोबाइल एपमार्फत दुईपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सेवाप्रदायक सवारीको …
१८० यात्रु बाेकेकाे हवाई जहाज तेहरानमा दुर्घटना
इरानलाई नयाँ हतियारले हमला गर्ने धम्की दिएपछि इरानले तोक्यो ट्रम्पको टाउकाको मूल्य